Manchester United oo u dhaqaaqday saxiixa 4 xiddig oo ka tirsan Real Madrid! | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha - Manchester United oo u dhaqaaqday saxiixa 4 xiddig oo ka tirsan Real Madrid!
Manchester United oo u dhaqaaqday saxiixa 4 xiddig oo ka tirsan Real Madrid!
February 13, 2018	119 Views
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in ay xiiso u qabto 4 ciyaaryahan oo u ciyaara kooxda Real Madrid.are reportedly interested in signing four Real Madrid players.
Tababare Jose Mourinho ayaa wada isku day uu wajiyo cusub ugu soo biirinayo kooxda Man United Kadib heshiiskii Alexis Sanchez oo kaga soo biiray kooxda Arsenal inti uu furnaa suuqii kala iibsiga ee Bishii naga dhamaatay.
Xiddiga reer Chilean ayaa lala xiriirinayay kooxda Manchester City, lakiin ugu dambeyn waxa uu ku biiray kooxda ay xafiltamaan ee Man United isgoo qeyb ka ahaa heshiiskii ciyartoy kala badalashada ahaa ee uu qeyb ka ahaa Henrikh Mkhitaryan oo isna kamid noqday Arsenal.
Sida ay ku warameyso jariirata Don Balon maamulaha reer Portuguese ayaa wada qorshe uu kula soo saxiixanayo xiddigaha kala ah, Marco Asensio, Toni Kroos, Raphael Varane iyo sido kale Isco oo dhamantood Madrid ka tirsan.
Wararka ka imaanaya Spain ayaa intaas ku daraya in kooxda Red Devils ay dooneyso in qorshahaas u qeyb ka noqodo sidii Los Blancos ay ku heli lahaayen goolhayaha ay u waalanayaan ee David de Gea.